ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း: 05/28/12
ပြည်သူ့ ဂုဏ်ရည်ဆု ရှင် "လဖိုင်နော်မိန်း"
ဒီနှစ် ၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွက် တတိယ အကြိမ် ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ဆုကိုတော့ ကချင်ပြည်နယ်မှာ သတင်းမီဒီယာ လုပ်ငန်းတွေ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖြစ်လာဖို့ အဓိက ဦးဆောင် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ လဖိုင်နော်မိန်း (Kachin Land News) က ဆုမဲပေါင်း ၅၁၃,၉၂၂ ပေးခဲ့တဲ့အထဲက ၅၁.၂၅ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပါပြီ။ သူ့ဘ၀ တစေ့တစောင်းလေးကတော့ အောက်မှာ အကျဉ်းဖော်ပြထားပါတယ်။
“၂ဝဝ၂ ခုနှစ်မှစ၍ မီဒီယာလုပ်ငန်း အဓိကလုပ်ကိုင်ရန်အတွက် မိုင်ဂျာယန်တွင် Sinpraw Bum Media (ဆင်ပရော့ဘွမ် မီဒီယာ) လုပ်ငန်းကို အဓိက ဦးဆောင်လု ပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ လူငယ်များအား မီဒီယာနှင့် ပတ်သက်သည့် သင်တန်းများ ပို့ချခြင်း၊ ကေအိုင်အိုအဖွဲ့၏ သတင်း မှတ်တမ်းဌာနတွင် ကူညီပံ့ပိုးခြင်း၊ ကချင်စကားပြော ဗီဒီယိုဇာတ်လမ်းများ တာဝန်ယူ ရိုက်ကူး ခြင်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။
၂ဝ၁၁ ခုနှစ်တွင် Kachinlandnews Web Site ကို တက်ကြွသည့် ကချင်လူငယ်တစုနှင့်လက်တွဲ၍ ဦးဆောင် တည်ထောင် ခဲ့သည်။ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် ဇွန်လတွင် ကချင်ပြည်နယ် အတွင်း ပြန်လည် စတင်ခဲ့သော ပြည်တွင်းစစ် ကာလအတွင်း ကချင် လူငယ် တစု စုပေါင်း၍ Kachinland News သတင်းဌာနကို စတင်တည်ထောင်ရာ လဖိုင်နော်မိန်းသည် တက်ကြွစွာ ပါဝင် ခဲ့ပြီး Kachinland News သတင်းဌာန၏ သတင်းထောက်ချုပ် တာဝန်ကိုယူခဲ့သည်။
၂ဝ၁၂ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၄ ရက်နေ့တွင် စိန်လုံဒေသရှိ ကောင်းဝဲတိုက်ပွဲအတွင်း စစ်ဖြစ်နေသည့်နေရာသို့ ကိုယ်တိုင်သွား ရောက် သတင်းယူနေစဉ် မြန်မာ အစိုးရ စစ်တပ်မှ ပစ်ခတ်သော သေနတ်ကျည်ဆံ ထိမှန်ကာ လည်ပင်းအောက်ပိုင်း ခန္ဓာကိုယ် တခုလုံး မလှုပ်ရှားနိုင်ဖြစ်သွားခဲ့သည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါ်အင်ခွန်ဆိုင်းအောင် နှင့် သမီး လဖိုင်နန်ဆိုင်းပန် တို့က အနီးကပ် ပြုစု စောင့်ရှောက် ပေးနေရသည်။
လဖိုင်နော်မိန်းသည် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ လူငယ်များအား လူသားတစ်ယောက်အနေဖြင့် အရေးကြီးသည့် ရှင်သန်ရပ်တည်မှု အပြင် ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ စိတ်နှလုံးနှိမ့်ချခြင်းများနှင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းအား အကျိုးပြုစေလိုပြီး လူသားဆန်စွာ အသက် ရှင်သန် ရန် စံနမူနာပြနေထိုင်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်သည်။
ဘဝကို ရိုးသားစွာဖြတ်သန်းပြီး သူတပါးအကျိုးအား အမြဲရှေးရှု ကူညီတတ်သူတဦးလည်းဖြစ်သည်။” လို့ သိရပါတယ်။
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 11:46 AM No comments:
တတိယအကြိမ်ပြည်သူ့ ဂုဏ်ရည်ဆု မှတ်တမ်း
တတိယအကြိမ်ပြည်သူ.ဂုဏ်ရည်ဆု ဆန်ကာတင်(၅)ဦးအနက် လူမှု.အထောက်အကူပြုအဖွဲ.(အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ.ချုပ်) ကိုယ်စား ဆုတက်ရောက်ယူအပြီးစုပေါင်းရိုက်ကူးထားပုံ။
တတိယအကြိမ်ပြည်သူ.ဂုဏ်ရည်ဆု ဆန်ကာတင်(၅)ဦးထဲမှ လူမှု.အထောက်အကူပြုအဖွဲ. (အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ.ချုပ်) ကိုယ်စားဆုတက်ရောက်လက်ခံယူအပြီး။(မေလ ၂ရ , ၂၀၁၂)
မှတ်တမ်း Yanchai Sha
ကျော်ကြားဖို့ မမစဉ်းစားနဲ့ ကိုယ်လူ။
ရိုးသား ကြိုးစား နိုင်ပြီလား။
ပေးဆပ် စွန့် လွှတ်ခြင်းတွေနဲ့ ပါ...တဲ့
ဖြူစင် ရှင်းသန့် တဲ့ စိတ်နဲ့ ပါ...တဲ့ဗျ။
အကုန် အကုန်လုံးဘဲ ဗျာ။
ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းနဲ့ဒဲ့ပဲ ပြောမယ်
ရိုး ( ခေတ္တရာ)